सुस्त मनस्थिति भएका एक व्यक्तिको पिसाब थैलीमा डेढ मिटर लामो बिजुलीको तार ! « News24 : Premium News Channel
सुस्त मनस्थिति भएका एक व्यक्तिको पिसाब थैलीमा डेढ मिटर लामो बिजुलीको तार !
चितवन/मकवनपुर । सुन्दै अचम्म लाग्ने तर वास्तविकता ! मानिसको पिसाब थैलीमा करीब डेढ मिटर लामो विजुलीको तार भेटियो भन्ने सुन्दा एक पटक पत्याउन पनि मुस्किल हुन्छ । तर, अचम्म लाग्ने घटना मकवानपुरमा भएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा न ४ छत्तिवन जुरेलीका ५० वर्षीय कान नसुन्ने र बोल्न नसक्ने कृष्णबहादुर फुयाँलको पिसाब थैलीमा १ सय बीस सेन्टिमिटर लामो विजुलीको तामाको तार भेटिएको छ ।